China F-201346 fitondra lehibe ho an'ny mpamatsy paompy piston Rexroth A4VG125 | Herin'ny ranoka elefanta
Valve fitarihana Hydraulika
Fitaovana familiana Hydro Orbitrol
Hydra Piston Pump Spare Parts
Paompy mitaingina hydraulic sy faritra iva
6E6474 Pump Hydraulica manolo ny cartridge amin'ny Wheel Lo ...
Paompy saka pompona saka OEM piesy piesy 9T andian-tsarimihetsika
1P40 VALVES CONTROL VALVE 1SPOOL
F-201346 fitondra lehibe ho an'ny paompy piston Rexroth A4VG125
A2FE160 180 piston paompy kozatra Big Bearing T7FC070
F-201346 dia ny mitondra paompy Rexroth A4VG125 plunger pump. Elephant Fluid Power dia manome bearings paompy plunger hydraulic. Ny bearings tany am-boalohany dia misy amin'ny vidiny mirary ary alefa ao anatin'ny 5 andro.
Ny ampahany lehibe amin'ny paompy dia ny fiterahana. Raha misy ny filalaovana, dia tsy azo antoka ny fahazoan-dàlana ara-dalàna an'ireo tsiroaroa miforitra telo ao anaty paompy hydraulic. Mandritra izany fotoana izany, ny hatevin'ny sarimihetsika misy menaka hydrostatic isaky ny mpivady fifandonana dia ho simba, hampihena ny fampiasana ny paompy plunger. ny fiainana. Raha ny angom-baovao nomen'ny mpanamboatra paompy hydraulic dia 10000h ny salan'isan'ny serivisin'ny famoahana ary ilaina ny manolo ny seranan-tsambo vaovao raha toa ka mihoatra io sandany io. Ny bearings nesorina dia tsy ho tsikaritra raha tsy misy fitaovana fanandramana matihanina, ary azo zahana maso ihany. Raha misy gorodona na volon-koditra hita eo ambonin'ny velaran'ny roller dia tsy maintsy soloina izy ireo.
Rehefa manolo ny bearings dia tokony horaisina ny saina amin'ny litera anglisy sy ny maodelin'ny bearings voalohany. Ny ankamaroan'ny bearings pump plunger dia mampiasa bearings capacité be entana. Vidio ny mpanamboatra sy ny famaritana tany am-boalohany. Raha manolo marika hafa ianao dia tokony hifampidinika amin'ny olona manana traikefa amin'ny fijerena ny latabatra sy ny fifanakalozana, ny tanjona dia ny hitazonana ny haavon'ny mari-pahaizana sy ny fahaizan'ny entana.
Ny paompy plastika axial dia afaka mampiasa mpanova matetika ihany koa mba hitsimbinana angovo herinaratra. Amin'ny fizotry ny famokarana tena izy, ny paompy plunger axial dia matetika miasa amin'ny tsindry na fikorianana mba hanitsiana ny fanjakana miasa. Rehefa lehibe kokoa noho ny tsindry ilaina ny tsindry tena izy, dia ahitsy amin'ny alàlan'ny valizy fanamaivanana mba hitazomana ny tsindry miasa ary avelao ny valva fanalefahana hamoaka ny be loatra. Ny motera dia mandeha amin'ny hafainganam-pandeha hatrany hatrany, ary mijanona tsy miova ny fandaniana herinaratra.
Ny takelaka valva dia misy endrika roa: fizarana fikorianan'ny fiaramanidina ary fizarana fizarana boribory. Ny tsikombakomba fizarana fizarana boribory dia amboarina amin'ny fikosoham-bary rehefa somary masiaka ny gorodona amin'ny velaran'ny fizarana fikorianan'ny fantsom-panafody: rehefa lalina ny zoro amin'ny fantsom-pivezivezana ny varingarina dia tokony ho feno "fitrandrahana injeniera ambony "alohan'ny hikosehana Aza mikosoka an-jambany mba hisorohana ny sosona varahina tsy hihavitsy na famoahana solika avy amin'ny fotony vy.
Rehefa mampiasa ny safo-drano mba hanitsiana ny tsindry sy ny fikorianany, ny sasany amin'ireo be loatra dia miverina miverina amin'ny rafitra tany am-boalohany, ka miteraka herinaratra tsy misy ilana azy ny paompy plunger sy ny fahombiazan'ny fiasa ambany. Raha misy inverter mitsitsy angovo Chuangjie ampiasaina, dia azo hapetraka Mihidy ny valizy mihoampampana, amin'ny alàlan'ny inverter mitsitsy angovo dia manitsy ny tsindry miasa mba hitazomana ny fitoniana ny tsindry miasa ary mandeha ho azy ny faneren'ny fitaovana. Tsarovy ny fifehezana mandeha ho azy, amin'ny fitsitsiana ny fanjifana angovo. Ny tombony lehibe indrindra amin'ity fomba fanitsiana ity dia ny fampihenana ny fanjifana angovo miasa amin'ny paompy piston axial, ary ny vokatr'ilay herinaratra dia mety hahatratra 30% mahery.
Ry mpanjifa malala:
Salama, Elephant Fluid Power dia vondrona fampandrosoana avo lenta miaraka amin'ny hery ara-teknika matanjaka, manome vokatra avo lenta, vahaolana feno ary orinasam-panompoana teknika kilasy voalohany ho an'ny mpampiasa. Ny orinasa dia mifikitra amin'ny foto-kevitry ny fametrahana orinasa amin'ny tsy fivadihana, mitazona ny kalitaon'ny orinasa ary mandroso amin'ny fandrosoana. Manohy miakatra tampon'isa vaovao miaraka amin'ny hafainganam-pandeha mafy kokoa izy ity ary mandray anjara amin'ny indostrian'ny automatisation nasionaly. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy taloha hividy ny vokatra tiany amin'ny fahatokisana. Hanompo anao amin'ny fo manontolo izahay!
Previous: A2FE160 180 piston paompy kozatra Big Bearing T7FC070
Manaraka: 1P40 VALVES CONTROL VALVE 1SPOOL
A2FE160 180 piston paompy spare parts Big Bearing ...